Vhidhiyo: Zvemukati zvinopesana neRedlinks | Martech Zone
Vazhinji vanhu vanopedza uye vanotengesa yavo nguva pane iyo optimization yewebhusaiti yavo, uye vanomuka vachikwenya misoro yavo kana imwe saiti ine hukuru hukuru asi isina kugadziridzwa. Imhaka yekuti kukwidzirisa zvirimo ingori hafu yehondo, kuri kutora kutariswa kwemamwe masaiti anonyatso sundira yako saiti kumusoro Kwekutsvaga. Basa reinjini yekutsvaga ndeyekupa mhinduro dzakakodzera. Kana akawanda mamwe masayiti anoremekedzwa achikunongedzera uye oti, "ndizvo zvauri!", MaInjini Ekutsvaga anozotarisa zvakanyanya kune izvo!
Tags: 3daukamhedzisiro yebhizinesiCAPTCHAchivimbo matekinorojikuburitswalyrisPima CPrecaptcha
Tora iyo 60 Yechipiri Blogging Dambudziko
Gumiguru 28, 2008 na12: 08 PM
Ini ndinofunga zvirimo zviri nani kwandiri. Ini ndakatsanangura zvakawanda pane izvi, Chinangwa cheblog rako ndechekuwana vamwe vashanyi. Saka iwe unofanirwa kupa uye kutumira zvese zvinoenderana niche zvemukati zvinofarira kubva kune vashanyi kana vatariri. Ruzivo mune yako blog rwakakosha, iyo yakanyanya kunaka ruzivo rwekuita zvirinani uye mazhinji masayiti anonongedzera kumashure kwauri.
Iyo backlink haina kuyerwa saiti yako iyo yakanaka. Mamwe mawebhusaiti anga akabatana neimwe niche webhusaiti asi yakaderera pr density kana pr chiyero chinogona kugamuchira. Dzimwewo dzimwe nzvimbo dzinogona kushandisa ngowani nhema imwe nzira yekubatanidza chinjana.
Vashanyi vanowana zvitsva zvazvino kana ruzivo rwakakosha. Kazhinji vashanyi havana hanya nemasayiti pavanovhura iyo link kuburikidza neiyo backlinked pavanoona iyo isina akakosha kana akakosha zvirimo chete spamming.